Inkinga yephutha ngesaziso sokuthi into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder ibangela ukufutheka kwangempela phakathi kwabasebenzisi abafinyelela ebhange le-VTB-24 ngokusebenzisa isiphequluli. Kwamanye imikhiqizo ye-inthanethi ebhange noma uma ufinyelela izinsiza ze-intanethi, ukuhluleka okunjalo akubonwa. Ngakho-ke kungani uma uzama ukungena ku-akhawunti yakho, iphutha "Into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder" ikhishwa (IE - Internet Explorer isetshenziselwa isiphequluli esizenzakalelayo esizenzakalelayo)? Ngenxa yezizathu zokwenzeka kokungasebenzi okunjalo nokuthi ungayisusa kanjani, funda. Indlela yokuqeda le nkinga ingasetshenziswa kwezinye izimo, uma ivela.
Into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder: liyini leli phutha?
Okokuqala, kufanelekile ukunaka iqiniso lokuthi imithombo ngokwayo (i-server) lapho ixhumeka kukhompyutha yomsebenzisi ngezinye izikhathi inendawo yokunikezwa ingasebenzi.
Ake sithi umsebenzisi ubona iphutha "Into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder, Kulungile ukuyicindezela, kodwa ayiniki umphumela. Kusho ukuthini lokhu? Yebo, kuphela ukuthi imbangela yangempela yokuhluleka akusekho kuseva kuphela, kodwa kuzilungiselelo zesistimu yomsebenzisi kanye nezilungiselelo zesiphequluli se-IE.
Uma kwenzeka ukuthi "Into ayisekeli indawo noma iphutha le-Browseforfolder" livela, ngilungisa kanjani isimo ukuze ngingakhathazeki ngokushintsha izilungiselelo? Ungamane uguqule isiphequluli bese uzama ukufaka imithombo yebhange ukuyisebenzisa.
Kodwa inkathazo yilezi: kubonakala ukuthi umsebenzi we-VTB-24 iklayenti-iklayenti ayisekeli konke ukuguqulwa kwababuyekezi, akeke wukuthi awusebenzi nabo bonke ngendlela efanele nangokwesekwa okugcwele okushiwo.
Izinyathelo lapho uqala isiphequluli
Kodwa emuva ku-"native" isiphequluli IE IE, esitholakalayo kunoma yikuphi ukuguqulwa nezinkinga ezihambisana ne-banking kuphela, kodwa kwezinye izinsiza kanye nezinsizakalo kwi-Intanethi. Uma umsebenzisi engafuni ukwenqaba ukusebenzisa i-IE nhlobo, noma kwezinye iziphequluli akukho ukufinyelela kumthombo, kuzomele wenze izenzo ezithile ezilula, okuvame ukuvumela ukuthi uqede isizathu somyalezo wokuthi into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder. Yini okufanele uyenze kulokhu?
Okokuqala kunconywa kakhulu ukuthi uvakashele iwebhusayithi ye-Microsoft esemthethweni bese ulandela inguqulo yakamuva yesiphequluli ukusuka kuyo ngokusekelwe kwindlela yokwakha isistimu efakiwe (ungayithola kwisigaba sokulanda).
Ngemuva kokufaka, izilungiselelo ezizenzakalelayo azikwazi ukuguqulwa, kepha mane ugijime isiphequluli njengomphathi (lokhu kusebenza ku-Windows 7 nangaphezulu). Imenyu yokuqala ibizwa ngokuchofoza ngakwesokudla kwisithonjana sohlelo. Mhlawumbe kwakuyisiqalo ngaphandle kwamalungelo omlawuli okwenza isaziso sokuthi into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder.
Ukufaka i-.NET Framework
Ngakolunye uhlangothi, isimo esingenhla singase singabi imbangela yokuhluleka. Enye inkinga enkulu ukuthi izinhlelo nezindawo eziningi zikhomba: ukufinyelela okulungile, i-.NET Framework version kufanele ibe okungenani 3.5.
Kwamanye amakhompyutha, ukubuyekezwa ohlelweni kungakhutshazwa, ngakho-ke kuhleleka ukufaka ipulatifomu ngokwakho, futhi ngaphambi kokulanda ukusatshalaliswa kokufakwa kusuka kumthombo we-Microsoft. Ngendlela, kungcono ukuthi ungafaki inguqulo ye-3.5, kepha ngokushesha ukuthola lapho isibuyekezo sesine noma ukukhulula 4.5.
Ukusetha izilungiselelo ezifanele ze-Internet Explorer
Manje amazwi ambalwa mayelana nokulungisa "Into ayisekeli impahla ye-Browseforfolder noma indlela" kusho isiphequluli, uma konke okungenhla kungasebenzi kahle.
Kulokhu, umsebenzisi kuzodingeka afinyelele izakhiwo zesiphequluli ku-Panel Yokulawula, ukhethe ithebhu yokuphepha kumasethingi okuhlela, uye kumasayithi athembekile, bese ufaka ikheli eligcwele lensiza ohlwini.
Ukuphepha nokusetshenziswa kwezingxenye ze-ActiveX
Uma, ngemuva kokushintsha izilungiselelo, umlayezo utholwa ukuthi into ayisekeli indawo noma indlela ye-Browseforfolder, kumele uhlehlise izinga lokuphepha ngokuhambisa ifolda (islayidi) esikhundleni esiphansi.
Kuthebhu yobumfihlo, udinga ukususa ibhokisi lokuhlola kusuka enkampanini ye-pop-up blocker.
Ngemuva kwalokho, kuthebhu efanayo yokuphepha ngezansi nangakwesokudla, udinga ukuchofoza inkinobho yezinga "Okunye ...", bese kuthi ewindini elisha thola umugqa wokuvumela ukusetshenziswa kwemingcele ye-ActiveX ngezizinda ezivunyelwe bese wenza isinqumo nge inkinobho ehambelanayo.
Ngandlela-thile, njengendlela yokukhetha, ungasetha futhi isinqumo sezindaweni eziphawulwe njengephephile. Ezimweni eziningi lokhu kusiza.
Yebo, nokunye okunye. Njengethuluzi elengeziwe, ungalanda i-platform ye-JAVA yamuva bese uyihlanganisa ohlelweni.
Uma kungekho okunye okusebenzayo, ungenza kabusha ngokugcwele izilungiselelo zesiphequluli. Futhi khumbula ukuthi uma uzama ukungena ohlelweni "VTB-24" izohlinzeka ukufaka isofthiwe ekhethekile ngesimo semodeli yokuvikela yokuvikela, okumele uvumelane ngayo nakanjani.
Ukususa izikripthi ezingalungile
Okokugcina, esinye isizathu sokungakwazi ukufinyelela amabhange ase-intanethi kungase kube ukuthi uhlelo lunezincwadi ezingasebenzi kahle zesistimu yokusebenza ngokwazo.
Esimweni esilula, angabonakala esebenzisa i-console yomyalo, ugijime njengomlawuli, lapho umyalo we-sfc / scannow ubhaliwe. Ngakolunye uhlangothi, ungazama ukuwavuselela noma ufake izinto ezingenalutho noma ezonakalisiwe usebenzisa isakhiwo se-DLL Suite esakhelwe ngokukhethekile.
Uma izingxenye ezilandiwe noma ezibuyekeziwe zesistimu zingakapheli, kungenzeka ukuthi ziphoqelele ezinye zazo ukuba zisuswe. Okokuqala udinga ukuya esiqondisweni somsuka ohlelweni bese ukhetha isiqondisi System32.
Manje qaphela !!! Kulo, amafayela alandelayo asusiwe:
Emva kokukhipha izingxenye ezikhethiwe kuyimpoqo, uhlelo lwekhompyutheni kumele luvuselelwe ngokuphelele, emva kwalokho ungazama futhi ukufaka uhlelo lwebhange lokuxhumeka ku-intanethi noma enye insiza ehlulekile.
Qaphela: le nqubo ihlongozwa njengethuluzi lwakamuva, ngakho-ke umsebenzisi kuzodingeka akwenze lokhu engozini yakhe. Ngisho nezichwepheshe zokuxazulula izinkinga zalolu hlobo musa ukunikeza ngokuphelele isiqinisekiso sokuthi emva kwalokho, ibhange lizosebenza, futhi (nakakhulu) uhlelo luzolayisha imodi evamile. Ngakho qaphela futhi uqaphele.
Lapha, eqinisweni, nakho konke okuphathelene nokulungisa ukuhluleka okunjalo okungajabulisayo mayelana ne-VTB-24 noma ezinye izinsiza. Njengoba ochwepheshe abaningi bebheka, le nkinga ezimweni eziningi iphathelene nalesi simiso esithile, nakuba kungenzeka ukuthi kungenzeka futhi uma ufinyelela amanye amasayithi nezinsizakalo zabo. Akunakwenzeka ukusho ngaso leso sikhathi ukuthi iyiphi inkinga kanye nokuthi yiyiphi imbangela yokubonakala kwayo. Ngakho-ke, kuzodingeka wenze izenzo ngendlela ehlinzekwe ngenhla (kusuka elula kuya eyinkimbinkimbi kakhulu). Ekugcineni, maqondana nenkonzo ye-intanethi yebhange ukuthi okungenani indlela eyodwa engenhla kufanele isize nakanjani.
Futhi uma kungekho lutho olunikeza umphumela omuhle ekulungiseni isimo, umsebenzisi ngeke abe nokunye okumele akwenze kodwa uxhumane nensizakalo yokusekela noma okungenani asebenzise izinsizakalo zomxhumanisi we-intanethi ngqo kwenye indawo. Njengoba kushiwo ngenhla, kungase kube ukuthi ukwehluleka kwenzeke futhi hhayi ngephutha lomsebenzisi kanye nezilungiselelo zesistimu yakhe. Kodwa, ukuze ungabheki nezilungiselelo ze-IE noma ususe imilabhu (engaphephile ngaso sonke isikhathi), kungcono ukucacisa ukuthi yisiphi isiphequluli esetshenziswa kangcono esikhundleni se-IE. Lokhu, njengoba kuboniswe abasebenzisi abaningi, yisisombululo esilula.
Culture: definition, ukubaluleka, umsebenzi